Liquid IV legit? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Liquid iv review - akwukwo akwukwo zuru oke
Liquid iv review - akwukwo akwukwo zuru oke
Liquid IV legit?
Isi Okwu.Liquid I.V.Ngwakọta ihe ọ drinkụ drinkụ na-a powụ mmiri ọgwụ na-enweta nyocha dị mma n'ịntanetị, ọ bụkwa ụzọ dị mma iji nọrọ na mmiri ma nyere ahụ gị aka ịmịkwuo nri ndị ọzọ. g.
Anyị niile maara na oke okwu ahụ dị mkpa. Somefọdụ ụmụ nwoke na-emere ha ihe ọ bụla. N'ezie, ọ bụ usoro N'onwe Gị a na-akpọ jelqing.
Mụ nwoke na-amụnye amụ ha iji wuo anụ ahụ. Ọ na-touted dị ka a eke amụ nditat mmega, ndị mmadụ na-ekwu ma ọ bụrụ na ị na-eme ya ga tinye olu na ogologo. Ọtụtụ ndị na-ahụ maka ịntanetị na-ekwu, hey, anyị na-enweta nnukwu nsonaazụ na jelqing.
Ọ DỊ MMA. Onye ọ bụla na-ege ntị na-efufe isi ya, lee ihe a. Anyị nwere nke ọ bụla? Jelqers na-ege ntị? Echeghị m na onye ọ bụla ga-eweli aka ya na nke ahụ.
Anụtụbeghị m ihe a. Anụtụbeghị m banyere ya, mana hey ị maara ihe m na-eme mgbe m nwere ajụjụ gbasara amụ nwoke? Ana m akpọ enyi anyị urologist na onye edemede nke 'Akwụkwọ Penis' Dr. Aaron Spitz sonyere anyị, onye na-esonyere anyị ugbu a na Skype, Okay, Dr.
Spitz: Ee, ndị mmadụ na-eme nke ahụ, ọ bụrụ otu a, gịnị na-eme, ndị mmadụ? kwuo na ị nwere ike mepee amụ gị, na-adọkpụkarị n'ụkwụ gị, mana ọ bụrụ na ha arịọ gị ka ị dọpụ ụkwụ gị, ozugbo na ihe niile, na ọ gaghị arụ ọrụ? Ndi mmadu ekwesighi ime nke ahu, Dr. Ọfọn, ị maara, enweghi ọtụtụ data na nke a, mana achọtara m nchọpụta sayensị ebe ndị ikom chere na penis ha pere mpe pere mpe jiri ohere ọ bụla ha nwere ike ịchọta n'ịntanetị ma ọ bụ na-achọ ịwa ahụ iji buo amụ ya. . Mgbe a jụrụ ha ma jelqing na-emere ha ihe ọ bụla, ha sịrị mba.
O wutere ha nke ukwuu n’ọrụ ha. Ihe ndị a na-ekwu bụ na site na iji aka gị na-esetị amụ gị n'ụzọ ụfọdụ maka nkeji iri abụọ n'ụbọchị, ọnwa isii ma ọ bụ karịa, ịnwere ike ịgbatị amụ wee nweta mmụba nha ma ọ bụ olu ruo otu afọ. Ọ naghị arụ ọrụ ma ọ bụ n’ezie ogologo oge maka slide dị mkpirikpi. (Ndị na-ege ntị na-achị ọchị) Dr.
Ọ bụ ezie, ọ dị ka nke a ga-emepụta ụdị ọnya anụ ma ọ bụ mmebi akwara na ogologo oge? Ee, ọ bụ ihe na-atọ ụtọ na ị na-eweta nke ahụ. Fọdụ ndị j. akwalite elqing na-ekwu hey ihe ọ na-eme bụ na ọ na -emepụta obere micro cracks wee mejupụta ọtụtụ anụ ahụ ma ọ bụ nchịkọta nke anụ ahụ na-eme ka amụ gị buru ibu.
N'ezie, ụlọ ere anaghị ebuwanye ibu. Ọ bụghị akpụkpọ gị. Ha nwere ike ime ka akpụkpọ gị gbanye.
Mana nha nke ezigbo erection sitere na ulo ndi ahu di n'okpuru akpukpo aru nke mejuputara collagen na elastin. I nweghi ike igbati ha aka. Ee, ị nwere ike ịmị ọkụ nke akpụkpọ amụ gị ma mee ka ọ dị ka ibu n'ihi na ọ na-afụ ọkụ ma na-aza.
Eleghi anya, achọrọ m imegharị imi m na m nwere ike ịkụ onwe m na ihu, imi na-ebuwanyekwa nwa oge. Mana nke ahụ agaghị abara m uru ọ bụla. N'adịghịkwa ka imi ebe ị nwere ike ịwa ahụ plastik wee gbanwee ọdịdị nke imi gị, anụ ahụ penile, anụ ahụ miri emi enweghị ike ịgbanwe.
Nweghị ike ịgbanwe ha site na ịdọkasị ha ma ọ bụ tinye na ngwaọrụ na-adọkpụ ma ọ bụ ngwaọrụ agụụ, ma ọ bụ ọbụna na-arụ ọrụ. Uru ndị na - erite mgbe amụ gị adịla mbụ dị obere. Ọ bụrụ na ị nwere ọrịa, nsogbu nke na - eduga na mkpụmkpụ amụ, ee.
Usoro ndị a nwere ike inyere gị aka. Ma na-ewere a nkịtị sized amụ na-eme ka ọ ibu, na-emekwa ka ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị ikom ndị na-jelqing ma ọ bụ nwere mmasị na jelqing na-eche na ha amụ dị oke obere na n'ezie nwere a nkịtị size amụ. Just chọpụtaghị.
Mgbe nwoke na-echegbu onwe ya na amụ ya pere mpe, ọ na-abịakwute urologist wee sị, hey doc, naanị tụọ m. Echere m na ị nwere ndị ọrịa na-eme nke a, ọ bụ ihe ihere, mana nke ahụ ọ bụ ihe ziri ezi? Nke a bụ ihe kachasị mma ị nwere ike ime n'ihi ịnwale azịza gị na ntanetị ma ọ bụ site na ndị enyi? ma ọ bụ na nzuzo, na nzuzo, na-enweghị aha, o yighị ka ị ga-enweta ezigbo ozi. Ogologo nha bụ obere ihe dị ka sentimita ise na ọkara, mana nha nkịtị bụ n'ezie ụzọ mgbatị abụọ dị mkpụmkpụ karịa otu ma ọ bụ ụzọ abụọ toro ogologo.
Ya mere nkịtị amụ size bụ ọbụna mkpumkpu karịa ise na ọkara sentimita. Gentlemen, penile dysmorphic disorder, ọ dị ndụ ma dịkwa mma. Imirikiti n'ime unu nọ ebe ahụ bụ ndị nkịtị.
Ọ bụrụ na ị na-echegbu onwe gị, lee onye dị ka Dr. Spitz ka enyocha ya. Egbula ịmepụta anụ ahụ dị na mpempe akwụkwọ iji mee ka ọ buru ibu; nke a agaghị agwụ nke ọma.
Dr. Spitz, daalụ, sir.
Mmiri mmiri mmiri nke IV ka mma karịa Gatorade?
Mgbe eji ya tụnyereGatorade, o nwere okpukpu atọ nke electrolytes na oberekarịaọkara shuga na calorie, ka o kwuru. Na nyocha dị iche iche, ndị guzobere kwuru na ihe ọ drinkụ drinkụ ahụ detụrụ ire. Companylọ ọrụ ahụ malitere ịzụ ngwaahịa dị iche iche, yana ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu:Liquid I.V.Hangover maka hangovers naLiquid I.V.Sep 30 2013
Bob na Brad abụọ a ma ama ♪♪ Physiotherapists ♪♪ na Ntaneti ♪ - Ndewo ndị be anyị, Abụ m Bob Schrupp, Physiotherapist - Brad Heineck, Physiotherapist - Lee anyị, ndị ọkachamara n'ihe banyere physiotherap na ịntanetị - N'echiche anyị n'ezie, Bob - Na-awụ akpata oyi n'ahụ! Ihe Onye Ọ Bụla Kwesịrị Knowmara Banyere Mmiri na Egwuregwu Ndị Na-ewu ewu. Ahụrụ m na ị laghachitere ntakịrị, Brad. - Ee. - Ya mere, anyị nwere akụkọ ebe a ka m chọrọ.
Ma ị bụ onye nkịtị, ị ga-amata ihe ị na-a drinkụ na ihe kpatara ị ga-eji tinye obere ihe na mmanya gị mgbe ụfọdụ, gbaa ọkara marathon ma ọ bụ ihe ọ bụla - ọ nwere ike ịbụ otu ihe - anyị ga-agabiga ihe ọ drinksụ sportsụ egwuregwu ndị ama ama. na ihe ọ drinksụ drinksụ oge niile ịchọrọ ịma banyere ụfọdụ ihe ị ga-eme. - Nke ahụ ziri ezi, Bob. Site n'ụzọ, ọ bụrụ na ị bụ onye ọhụụ na ọwa anyị, biko were nke abụọ iji denye aha anyị.
Anyị na-enye akụkọ banyere otu esi edozi ahụ ike, dabara adaba na enweghị ihe mgbu, anyị na-ebugo kwa ụbọchị chọrọ ịga leta anyị na ntanetị mgbasa ozi anyị na weebụsaịtị anyị - ee - bobandbrad.com, n'ihi na anyị na-enye ihe mgbe niile. Anyị ga-, taa enweghi ihe ọbụla, mana site na echi, ọ bụrụ na ị nọrọ na Satọde, ugbu a.
Ọ bụrụ n’ịlele nke a mgbe Satọde gachara, ị kwesịrị ịdị mma, nwekwaa inyefe ego. Kedu ụzọ ọ bụla, naanị gaa bobandbrad .com ma gaa na ngalaba inye ego, nke ahụ ga-agwa gị ihe anyị na-enye. - Ọfọn, biko. - Anyị na-enyefe ugwu dị elu, dị ezigbo mma. - Oh, maka ebe ọrụ kọmputa. - Ee, eletriki, ọ bụ ọkụ eletrik, ọ dị ezigbo mma. - Yup, mma.- Ma ọ bụghị na ị ga-aga BobandBrad na Facebook.
A na-atụgide ya n'elu peeji ahụ. Chọrọ ka anyị dị mkpụmkpụ, ọ bụrụ na ike gwụrụ anyị, anyị gafee Twitter na Instagram - ebe ahụ ka ị na-aga Bob. - Enwetara anyị ụdị nke 60 nke anyị - Nnukwu ọrụ Bob, akpịrị na-akpọ m nkụ ọzọ, Bob - Ọ dị mma, ị nwere ike ịpụ ugbu a, ọ na-agba nwamba na nkịta. - Ee, ọ bụghị egwu egwu.
Ka o sina dị, Bob, ihe dị ka otu izu gara aga, anyị webatara otu isiokwu ihe ị ga-a drinkụ. Mmiri bụ ihe dị mma ị toụ mgbe ị na-arụ ọrụ na ọsụsọ, na-emega ahụ, na-agba ọsọ, ihe ọ bụla. - O doro anya.- Ya mere, echere m, m ga-eme nyocha, emere m ya, ọ gbadakwara ya, ihe kachasị mkpa bụ, mgbe ọrụ gị dị elu, ị ga-agba ọsụsọ, ị ga-enwerịrị ? Sodium - Ikwesiri imeju sodium - Aka nri, aka nri.
Yabụ, mmiri n'onwe ya dị mma, mana ịnwe sodium na-enyere aka, yana electrolytes ndị ọzọ dịkwa mkpa, mana sodium bụ nke mbụ - enwere m ike ịbụ onye isi maka ya n'ihi na ọ bụrụ na m mee, a bụ m onye, ​​ọsụsọ na-agba, yabụ M na-eme ọtụtụ ọrụ, ihe dị ka awa atọ, - m na-ekwu, enwetara m ihe ijuanya, m na-ekwu, m ga-enweta obere - Ọfọn, ị dị egwu n'agbanyeghị - enwere m iju, m dị egwu ma agbanyeghị, ọbụlagodi onye obia.- Nwunye gi enweghi ike iguzo gi. - Naanị ihe m mere bụ iweta ya ebe a? - Ee, kpọbata ya.
Ya mere, anyị nwere ụfọdụ mmanya a ma ama nke ị ga-achọpụta, ụfọdụ ị nwere ike ịchọpụtaghị, anyị nwere ha ebe a. Anyị nwere mmiri ebe a, mgbe ahụ anyị nwere ihe ọ drinksụ drinksụ na-ewu ewu ebe a, Gatorade, kedu ihe anyị nwere, Powerade, lee nke a, Bodyarmor, lee nke a, ọ dị ka akpa mara mma, mgbe ahụ anyị nwere akụkụ nke ọzọ amaara m na ha enwebeghị ezigbo ahụ ike ị toụ Pepsi na Cola - Right, ndo, Pepsi na Cola, mana nke ahụ bụ otu ọ dị. - Ee, yabụ ka anyị si n’ụzọ ahụ pụọ ntakịrị, maka na anyị nwere tebụl n’ezie.
Ihe m mere, Bob, m mere mgbakọ na mwepụ n'ihi na ndị a niile dị iche iche nke olu - ee, ọ dị mma - yabụ ọ bụ ntakịrị nduhie. Ọ bụrụ na ị lelee nke a, ọ na - ekwu ego ma ọ bụ gram shuga mana ọ bụ naanị maka ounces 8 ma anyị nwere mkpo ounce 28.- Oh, jide n'aka.- Ya mere, ọ dị njọ.- Ee, ị chere na ị gaghị enweta oke shuga , ma anyị ga-ahụ eziokwu.- Ee, kpọọ.- Anyị eruo n'okwu nke ihe.- Ọ bụ ebe ị gara. - Anyị dị ka ndị nchọpụta.- Ya mere, anyị nwere ihe ọ drinksụ theụ.
Anyị nwetara Coke na Pepsi anyị, ụdị ndị na-adịghị mma, anyị wee nweta ntọala, mmiri, wee drinksụọ ihe ọ otherụ fiveụ ise ndị ọzọ ebe a - ọzọ dabere na 16 ounces - 16 ounces, just right. - Na na na, na na na. - Anyi nwere onodu shuga, kalori, na sodium.
Cheta, sodium dị mkpa, ịkwesịrị ịba ya n'ime ahụ gị mgbe ọsụsọ ga-agba gị. - Ya mere, ọ bụ ihe na-atọ ụtọ, ị nwere ike ị drinkụ Pepsiand na-a drinkụ Cola wee nweta ezigbo sodium - Eleghị anya ezughị - Eleghị anya ezughị - Ma lee anya na, Bodyarmor enweghị ọbụna sodium dị ka Pepsi na Cola, - Ee , nke ahụ bụ ihe iju anya. - Ọ bụghị n'ezie, adabaghị n'ụdị ihe ọ drinkụ drinkụ egwuregwu.
Ọ bụ eziokwu na ọ nwere mmiri oyibo na electrolytes ndị ọzọ dị mma, mana ọzọ, sodium dị oke egwu Video si izu gara aga - Aka nri, tupu nke ahụ - Ee, yabụ ka anyị lee ọkwa shuga. Pepsi na Cola, ha dị otu, 55, 52, uwe agha, 36 gram - nke ahụ bụ ọtụtụ shuga ị ga-ewere maka ihe ọ drinkụ sportsụ egwuregwu, ma ọ bụ ka anyị kwuo na ị na-eji ya naanị iji rụọ ọrụ n'èzí, m na-ekwu, na gị ịchọrọ ịnara electrolytes, nke ahụ na-ewere ọtụtụ shuga - ị chọghị oke shuga ahụ - ị chọghị shuga ahụ, ị ​​chọghị ya ma ọlị - yabụ achọrọ m itinye Bodyarmor na Pepsi na Cola udi. O nweghi otutu ma o nweghi otutu sodium ya mere na odighi adabara otu a - echere m na anyi kwesiri iwere akara wee gaa otu a - Ee, ha agaghi acho ulo oru a.
Kedu maka Powerade na Gatorade, ọdịnaya shuga ha dị obere, yabụ nke ahụ ka mma, na calorie metụtara shuga na shuga - O doro anya. Yabụ na agaghị m etinye oge dị ukwuu na ya, mana ị nwere ike ịlele nke a, ọdịnaya sodium dịkwa ukwuu, dịka ị pụrụ ịhụ, milligrams 200, 211, yabụ nke ahụ bụ --- mana nke ahụ adịchaghị mma ma m ka ma. - Ọ bụghị.- M na-ekwu, gịnị kpatara ị na-a sugarụ shuga a mgbe ị na-anwa ime ka ahụ dị gị mma na ị maara ihe m na-ekwu? - Ọ bụ na ị chọghị ya.- Yabụ, ha dị mma karịa, mana ọ ka bụ nnukwu shuga.- M ka ga-ewere X ma gafee ya. - Ọ dị mma, ka anyị mee nke ahụ.
Ugbu a, m ga-ekwu otu ihe.- M na-aga nna jidere ihe nrịbama.- Bob na-enwe obi ụtọ ebe a.- Okwu na-aga n'ihu.- Ya mere, Powerade na Gatorade nwere ụdị shuga na-enweghị shuga, Bob.- Okay, oh that right .- Ma ekwesịrị m ịkọwa nke ahụ n'ihi na 'Aghaghị m ịnakwere gị ya.- Ee.- Mana amaghim ma ọ bụrụ na ọtụtụ mmadụ na-a drinkụ ya.
M Iụọ ya, ọ naghị atọ ụtọ nke ukwuu. Ọ na-ahapụ m ahịhịa n'ọnụ m.- dietdị nri? - Ee, ihe ọ bụla.- Pep, enweghị shuga, ụdị ahụ- Ee, enweghị suga Gatorade bụ ihe m nwere, nke ahụ adịghị njọ. - Ya mere, anyị nwetara nke gafere, anyị gafere otu, anyị gafere nke a.
Ndị ahụ bụ akara akara, ọ bụghị ha? - Eeh. - Ma ọ nwere ike bụrụ na ị gafere ha, m na-ekwu na ndị a bụ, - Ọfọn, ọ bụrụ na anyị chọrọ nke kacha mma, anyị ga-agafe ha.- Ọ dị mma.- Ugbu a, ka anyị gakwuru ụfọdụ ndị na-adịchaghị ala na nke a bụ otu, ọ na-abịa n'ime mkpọ.
Have ga-agwakọta ya na mmiri, obere ihe ọagedụagedụ a hereụ juru ebe a, a na-akpọ ya Liquid IV, mara mma --- anyị anaghị akwado nke a. Echere m, anyị enweghị nkwekọrịta ọ bụla na ụlọ ọrụ ndị a - mba - ọ dịghị ma ọlị - ihe ọ bụla, anyị na-ahapụ ya-ya mere Liquid IV nwere gram 11 nke shuga, nke dị mma karịa ndị ọzọ na Calories dị 50, dị mma, ma lelee sodium na milligrams 500, ọ karịrị ihe ọ bụla ọzọ - yabụ ọ bụrụ na ị na-ekiri sodium gị ma chọọ ihe mana ọ bụghị nke ukwuu ma eleghị anya Liquid IV agaghị 'abụghị maka gị.- Ọ nwere ike juo.- Ee, enwere ike karịa.- Ọ bụrụ na ịnweghị nsogbu sodium na ị na-egwu egwuregwu ike ike, nke ahụ ga-aka mma maka gị, ọ bụ ezie na anyị agaghị elele n'oge ọ bụla, ọ ga - adị, - Ee. - Ma nke ahụ na-abụ ihe na-arụ ọrụ maka gị, nri? - Ee, ejiri m nke ahụ wee hụ dọkịta m na - atụ aro na - Ọ na - abịa na obere obere akpa dị ka nke ahụ - Ee, obere ihe na - eme ka m were ndị ahụ ọgwụ ahụ na ihe m na - eme bụ na m na - etinye ya na karama mmiri r. ma tinye ya ebe ahụ, ọ na - egosipụta, ya agbaze - ọ na - agbaze - ee, ọ bụghị naanị iri mbadamba nri ka ị na - eri ya? - ị mere nke ahụ otu ụbọchị, ahụrụ m na - ọ bụ ihe na-atọ ụtọ, ọ na-egosipụta n'ọnụ gị - ee ọ na-egosipụta n'ọnụ gị - nke a bụ otú ha si eme swiit - enwere m mmasị na uto ahụ ma jiri ya mgbe m na-egwu golf n'ihi na m nwere ike ịgba ọsọ golfing na ọ dịkwa ka ọ na-enye m obere nkwado, ma eleghị anya ọ bụ ihe niile gbasara uche.- Ọfọn, onye maara.- Ee, mana m na-ekwu, ị lere anya na nke a, gram shuga, - Aka nri. - naanị calorie 15, ọ ga-abụrịrị nnu zuru m. - Aka nri, milligrams 360.- Na electrolytes na ndị dị otú ahụ maka m, nke ahụ bụ azịza ya, anyị na-atụnyere ihe niile na mmiri, nke mmiri dị mma, mana mmiri anaghị enye gị electrolytes ọ naghị enye gị nnu. - Aka nri, yabụ ọ bụrụ na ịsụsọ ọsọsọ, mmiri bụ ezigbo ihe ị ga-a drinkụ, mana ị ga - eme ihe na - esote - nke ahụ bụ nsogbu bụ, m na - a drankụ mmiri ma ọ na - asacha gị, ọ na - asachapụ ndị electrolytes gị ma gị ezughi ya na mgbe ahụ na mberede ị - dizzy ma ọ bụ dizzy - ee, ọ bụ m. - Achọrọ m ịkọwa otu ebe ebe a n'ihi na m wepụtara oge iji chọpụta oke shuga dị na karama nke Bodyarmor. - Site na Bodyarmor - Ma ọ bụ ya, gram 72 - Lelee nke ahụ, nke ahụ bụ ọtụtụ shuga - Ee, yabụ ị nwere ike were mmiri, were shuga, rie shuga, saa ya - ntakịrị nnu n'ime ya.- Ee, mgbe ahụ ọ ga-abụ otu ihe ahụ, mana ọ dị ọnụ ala.- Ee, Bodyarmor agaghị achọ ka anyị.- Ha agaghị amasị anyị.- Ma ị maara ihe, nke ahụ dị mma n'ihi na anyị nọ ebe a.- Nke ahụ dị mma. - Anyị ' anọghị ebe a maka ụdị ndị a. - Bịanụ, ugbu a, a zụlitere gị, lee ihe ị na-a drinkụ, ugbu a ị maara ihe ị kwesịrị ịma, na abụọ ndị a nọ ala ebe a, echere m na II ga-ahọrọ otu n'ime ndị a, karịsịa ụnyaahụ, ụbọchị abụọ gara aga, anọ m na igwe kwụ otu ebe ma ọ na-ekpo ọkụ ma na-ekpo ọkụ.
Iru mmiri ahụ gbagoro ma enwere m ike ịhụ ya. Naanị ihe mere ka ọ gbafuo m. - O doro anya, ee.- Naanị m na-a waterụ mmiri, enweghị m ihe mgwakọta.- Ee, m ga-achọ ịhụ ma ọ bụrụ na ị ka mma karịa na enweghị ya, enwetara m mgbaàmà ahụ, mana ọ na-adị m mma mgbe Ana m eme ya dịka nri mgbe m nọ ebe ahụ, anaghị m eme ya, ọ bụ naanị echiche m - echekwara m na ndị na-agba ọsọ ogologo oge ga - egosi nke a - Ee.- Ndị a dị oke, ị maara, dị ka Ironman, ọtụtụ mgbe, ihe ndị a na-adịgide ruo ọtụtụ awa.- Ee, ọ bụrụ na ị na-eme Ironman, tinye ihe ị kwuru n'okpuru.
Ọ ga-amasị m ịnụ ihe ị ga-ekwu.- Wisconsin Ironman ga-abụ Satọde a. - Oh, ọ bụ n'ezie? - Ee, nnukwu mmemme, onwere mmadụ 2,000 ga - eme nke a --- Ebee ka a na-eme ya? - Madison, Wisconsin, ekwughị m nke ahụ? - Ee e, ị nwere Wisconsin - Oh, Wisconsin, ee Madison - Ọ dị mma, daalụ onye ọ bụla maka ikiri - Gụọ Rambo na uzo dị iche.
Gịnị bụ mmetụta nke mmiri mmiri IV?
akpata oyi / ịma jijiji.
mgbu na aka ma ọ bụ ụkwụ.
igwe eji agba igwe
Liquid IV ka mmiri mma?
IVHYDRATION na-enye ihe ndozi
Ọ dị mkpa ka ị dochie ọ bụghị naanịmmiri, kamakwa mineral dị ka calcium, sodium, magnesiumnapotassium. Ebe obu na inwere ike igha iri nrima ọ bụọbụlagodi ala ihe ọ drinkụ drinkụ egwuregwu n'oge mmanya na-egbu, ụzọ kachasị mma iji nweta ngwa ngwa electrolytes dị mkpa bụIVọgwụgwọ.Jul 18 2016 g.
Mmiri mmiri nke anọ nwere ike inyere gị aka ịkwụsị ibu?
Otu n'ime ọtụtụ uru nkeIVọgwụgwọ bụ ikikekaọkụabụbama mụbaa metabolism. Ọ bụrụgịAnọla midaobere sentimita ole na ole n'úkwù gị, nke anwere ikenyegịụfọdụ mmeziEnyemaka.
Ọ dị mma ị drinkụ mmiri mmiri IV kwa ụbọchị?
Liquid I.V.bunchebe na-erina otutu servings. Otú ọ dị, ọ ga-ekwe omume karịa hydrate, ma dị obere.
Liquid IV enyere aka na ọnwụ ọnwụ?
Liquid IVnaIbu Efu
Dị ka ndị na-edozi ahụ si kwuo, mmiri dị mmanwere ikeduruọnwụ ọnwụ. Nnyocha ọzọ nke ndị na-edozi ahụ na-akpakọrịta na guayusa mgwa na Ihi ụra Multiplier naọnwụ ọnwụ.Ọnwa Ise 11, 2021
Kedu nke dị mma mmiri mmiri IV ma ọ bụ Pedialyte?
Na isi,Liquid IVnaPedialytebụ otu ihe ahụ n’ihe gbasara mineral, nnu, na shuga. Ha abụọ dabere na usoro ọgwụgwọ mmiri ara WHO. Na kwuru,Liquid IVnwere vitamin B, Vitamin A, na Vitamin C nke ahụPedialyteadịghị. Na mkpokọta,Liquid IVnwere ihe ọzọ ị ga-enye. g.
Liquid IV enyere gị aka idalata?
Nke abụọ, n'ihi ihe ụfọdụ, ọ dị kakabelata agụụ m nwere maka shuga na ihe na ato uto.Mn'ezie furu efuibu ibukemgbeMamalitela ị drinkingụ mmanyaLiquid IV.Enwere m ikenwee swiiti mmanya, brownies, wdg na-anọdụ na tebụl na enweghị mmasịha.
Ugboro ole ka i kwesiri iji mmiri mmiri IV?
E nweghị ịgba na oleị nwere ikedrinkụọ ihe ọ inụ inụ n’ụbọchị, maanyịkwadoro nke ahụgịgee ntị mkpa anụ ahụ gị na azịza gịmgbe olena-a drinkingụ Energy Multiplier. Ike Multiplier dị ka iko kọfị 1-2. Ọ bụrụgị'abụghị onye ihe ọ cafụ cafụ caffeinated,anyịkwadoro ị drinkingụ mmanyaotuna-eje ozi na ịkwa akwa site na ebe ahụ.
Kedu mgbe ị kwesịrị ị takeụ mmiri mmiri IV?
Ọ bụ site na ngwaahịa nke ahụ gị na-anwakaweghachite mmiri na mmiri electrolyte n’ahụ gị. Gbalịa inweLiquid I.V.n'ime nnukwu iko mmiri tupu ị gawakabed na onye ozo ututu mgbegịhadụọ mmanya na-aba n'anya ole na olekabelata mmetụta nke oke mmanya ma nyere aka weghachi ahụ gị. 5.Ọgọst 8 2017
Kedu ụzọ kachasị mma iji jiri mmiri mmiri IV?
Etu esi eji mmiri mmiri anọ. Ngwunye Hydration. Gwakọta otu pawuda ntụnyere na mmiri oyi na-a averageụ ihe ọ afterụ drinkụ mgbe mgbatị ahụ ma ọ bụ oge ọ bụla ịchọrọ hydration. Ike Multiplier. Tinye otu nri na mmiri zuru oke ma drinkụọ oge ọ bụla ịchọrọ ike. Ihi ụra ọtụtụ
Ọ nwere nnyocha ọ bụla na-akwado azịza nke mmiri mmiri IV?
Ndị na-emepụta ihe na-emepụta ngwaahịa atọ. Ngwaahịa ha bụ Liquid IV Hydration Multiplier, nke bụ ihe ọ electroụ GMụ na-abụghị GMO electrolyte nke na-ekwu na ọ ga-eme ka mmiri gị dị okpukpu abụọ. Ngwaahịa abụọ ndị ọzọ sitere na ụlọ ọrụ ahụ na-elekwasị anya na ịkwalite ogo ike gị ma na-ehi ụra ka mma. Enwere nyocha ọ bụla na-akwado nkwupụta ndị Liquid I.V?
Kedu ihe ị chọrọ ịma gbasara mmiri mmiri I.V?
Gịnị bụ Liquid I.V.? Liquid I.V. bụ ihe ọ hydụ hydụ ihe ọ hydụ hydụ hydration ọhụrụ nke na-enye ọtụtụ uru ndị a na-ahụghị na ngwọta ọ bụla ọzọ dị na ahịa.